गरिबका लागि निःशुल्क उपचार : मन्त्री यादव
काठमाडौं, १३ कात्तिक । उप–प्रधान एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले असमानता र विभेद अन्त्य नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने बताएका छन्। सप्तरीको हनुमानगर कङ्कालनी नगरपालिकास्थित हनुमानगर बजारमा
मधेश झरेर प्रचण्डको दाबी, प्रदेश २ बाट नै पहिलो रेल गुड्छ
महोत्तरी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले समग्र देशको विकास र समृद्धिमा सम्पूर्णरुपले समर्पित पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी नै भएको बताउनुभएको छ । बुधबार महोत्तरीको पिपरामा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा आयोजित शुभकामना
गोरखामा रूखबाट लडेर एक युवकको मृत्यु
गोरखा, १३ कात्तिक । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–८ बोर्लाङस्थित महादेवटारमा रूखबाट लडेर आज एक युवकको मृत्यु भएको छ । घर नजीकै रहेको बारीमा दबदबेको रूखमा घाँस झार्न चढेका अन्दाजी ३७
कमल थापाको स्वास्थ्यमा सुधार, भोलि नेपाल फर्कने
काठमाडौं, १३ कात्तिक । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य छ । पिडौँला र तिघ्रामा समस्या भई ढाड दुखेका कारण अस्वस्थ्य भएका अध्यक्ष थापाको स्वास्थ्य अवस्था
प्रधानमन्त्री ओली ग्राण्डी अस्पताल भर्ना, के भएको हो ?
काठमाडौं, १३ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज विहान ग्राण्डी अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अस्पताल लगिएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस
दिदीबहिनी नहुनेले रानीपोखरीमा भाइटीका लगाए
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ नहुनेहरुले काठमाडौँको रानीपोखरीमा पुगेर भाइटीका लगाएका छन् । रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर आजकै दिन
सिंगापुरमा हुँदापनि छुटेन गगनको भाइटिका
काठमाडौं, १२ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा पूर्वमन्त्री गगन कुमार थापा यतिवेला सिंगापुरमा छन् । छात्रावृत्तिमा अध्ययनको लागि सिंगापुर गएका थापाको भाईटिका पनि सुखद् नै
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा बहिनीहरुको हातबाट टिका ग्रहण
काठमाडौं, १२ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नी बहिनीद्वय विष्णुमाया ढकाल र कौशिलादेवी कोइरालाबाट भाइटीका लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दिउँसो १ बजेर ३८ मिनेटको समयमा प्रधानमन्त्री
बहिनीको हातबाट टिका ग्रहण गरेपछि बाबुरामले सेयर गरे यस्ता तस्विर
काठमाडौं, १२ कात्तिक । सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो वर्षको भाईटिका पनि शुभ साईतमै बहिनी पार्वतीको हातबाट टीका ग्रहण गरेका
काठमाडौं, १२ कात्तिक । प्रत्येक वर्ष कात्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गर्दैछन् । यमपञ्चकसमेत भनिने तिहारको पाँचौं दिन
माधव नेपालपनि ओलीको प्रशंसामा उत्रिए
काठमाडौं, ११ कात्तिक । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले विकासका लागि अघि सारेको अभियान सकारात्मक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको
सप्तरी, ११ कात्तिक । राजविराज–रुपनी सडकखण्डको राजविराज नगरपालिका–९ मलेठमा ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा आज मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । ट्र्याक्टरको ठक्करबार मोटरसाइकल चालक रुपनी गाउँपालिका–५ मुसरहनियाका १९ वर्षीय दिपेश यादवको